Ini ndinowana Sei Yangu iPhone Kubva kuComputer? Nzira Yakareruka! - Iphone
pinda apuro id password inoramba ichibuda
iphone 6 s hapana basa
bhatani repamba harishande pa iphone 5
Ini ndinowana Sei Yangu iPhone Kubva kuComputer? Nzira Yakareruka!
How Do I Find My Iphone From Computer
Unochengetedza shamwari dzako padyo, uye yako iPhone padhuze. Kunyangwe iwe ukangwarira, zvinokwanisika kuti yako iPhone ishaike. Kunyangwe zvarasika mumurwi wewachira kana kuita nzira yayo kuyambuka taundi muUber, zvakanaka kuti uzive kuti ungawana sei yako iPhone kubva pakombuta. Muchikamu chino, ndichakuratidza mashandisiro aungaita Tsvaga Yangu iPhone kubva pakombuta kuti ugone kuwana yako inoshaya iPhone, ipapo.
Chii Chii Tsvaga yangu iPhone?
Tsvaga yangu iPhone inokutendera kuti uwane yako iPhone, Mac, iPad, iPod, kana Apple Watch kana zvarasika kana kubiwa. Unogona kuvawana vachishandisa iyo Tsvaga iPhone app pane yako iPhone, iPad, kana iPod, kana iwe unogona kushandisa komputa yako kuwana ako maano - zvakanyanya pane izvo mune yechipiri.
Inowana Sei Yangu iPhone Kushanda?
Tsvaga yangu iPhone inoshanda nekushandisa Nzvimbo dzeNzvimbo (kusanganisira GPS, shongwe dzemasero, nezvimwe) pa iPhone yako kuratidza nzvimbo ye iPhone yako pamepu. Pane zvimwe zvinotonhorera zviripo online zvinogona kukubatsira iwe kuwana kana kuchengetedza yako iPhone. Asi zvakawanda nezve izvo zviri muminiti.
Ini Ndinoshandisa Sei Tsvaga Yangu iPhone Kubva kuComputer?
Kuti ushandise Tsvaga yangu iPhone kubva pakombuta, enda ku icloud.com/find uye pinda neApple ID yako uye password. Zvese zvishandiso zvako zvichaonekwa pamepu. Tinya Zvese Midziyo pamusoro pechiso kuona rondedzero yezvose zvishandiso zvine Tsvaga yangu iPhone yakavhurwa uye zvakabatana kune yako Apple ID. Tinya pazita rechinhu chimwe nechimwe kuti uridze ruzha, isa chishandiso chako mumamiriro akarasika, kana kudzima chishandiso chako.
Paunenge uchinge wapinda, iwe uchaona mepu ine dhi girini inokuratidza inofungidzira nzvimbo ye iPhone yako, iPad, kana iPod. Chero bedzi iyo yakamiswa nenzira kwayo, sevhisi ichitoshanda yekutsvaga yako Apple Watch kana Mac komputa. Izvo zvinoshamisa!
Mira! Tsvaga yangu iPhone Isiri Kushanda!
Kuti uwane yangu iPhone ishande, zvinhu zviviri zvinoda kuitika:
iphone ziviso yepakati isiri kushanda
1. Tsvaga yangu iPhone inofanirwa kuve inogoneswa pane yako iPhone, iPad, kana iPod
Unogona kutarisa kana Tsvaga yangu iPhone inogoneswa izvi nekuenda ku Zvirongwa -> iCloud -> Tsvaga yangu iPhone .
Mune ino menyu, ita shuwa switch iri padhuze nekutsvaga My iPhone yakavhurwa. Kana zvisiri, chingobaya switch. Inofanira kushandura girini, ichikuzivisa iwe kuti inogoneswa.
Paunenge uripo, ndinokurudzira zvikuru kuti utumire Yekupedzisira Nzvimbo yakavhurwa zvakare. Izvi zvinobvumira iPhone yako kutumira otomatiki Apple yako iPhone nzvimbo kana bhatiri radzikira. Nenzira iyoyo, kunyangwe bhatiri rikafa, unogona kutsvaga kuti iripi iPhone yako (chero bedzi pasina munhu anoifambisa!).
2. Tsvaga yangu iPhone inofanirwa kuvhurwa munzvimbo dzeNzvimbo
Kana Tsvaga yangu iPhone yakamisikidzwa pane yako iPhone uye iri online asi Tsvaga yangu iPhone ichiri kusashanda, tarisa yako Nzvimbo Yemabasa tebhu. Nzvimbo dzeSevhisi dzinofanirwa kuve dzakagoneswa Tsvaga Yangu iPhone Kuti utarise izvi, enda ku Zvirongwa -> Zvekuvanzika -> Mahara Mahara . Bhura nepakati peiyo runyorwa rweapps kusvikira iwe wasvika kuKutsvaga iPhone. Izvi zvinofanirwa kuiswa kune Uchishandisa iyo App. Kana zvisiri, tinya Tsvaga iPhone uye sarudza Paunenge Uchishandisa iyo App. Voila!
Uchishandisa Tsvaga Yangu iPhone Pane iCloud.com
Tsvaga yangu iPhone kubva pakombuta inoshanda chete kana iyo iPhone iri online. Kana zvisiri, iyo webhusaiti yeICloud ichave ine grey dot padyo nenzvimbo yekupedzisira inozivikanwa ye iPhone. Unogona kuseta chirongwa ichi kuti ndikuudze iwe nguva inotevera iyo yako inoshaya iPhone inoenda online. Ingotinya iyo Zvese Midziyo donsa pasi menyu, uye sarudza yako iPhone.
Ikozvino panofanirwa kuve nebhokisi mukona yekurudyi-ruoko kona yeiyo browser hwindo. Ndipo panoitika mashiripiti. Kana yako iPhone isiri yepamhepo, unogona kutarisa bhokisi padhuze nekwaanoti Ndizivise kana ndawanikwa .
Bhokisi rimwe chetero rine dzimwe sarudzo shoma dzinonakidza. Unogona kuseta alarm pane yako iPhone kubva pawebhu webhu peji. Ingosarudza Ridza Ruzha .
Kana yako iPhone isina kurasika mumasofa macouchion uye alarm haina kukubatsira kuiwana, unogona kushandisa ino webhusaiti kuisa yako iPhone mukati Yakarasika Mamiriro . Yakarasika Mode inoita kuti iwe uratidze imwe nhamba yekubata pane iyo iPhone skrini, saka kana mumwe munhu akaiwana, vanogona kuidzosera kwauri.
Asi kana zvese izvi zvisirizvo zvisiri kubatsira, kana iwe uchifunga kuti mumwe munhu anogona kunge atora yako iPhone, unogona kudzima yako iPhone kubva papeji rimwe chete. Ingosarudza Kudzima iPhone .
ndinoita sei kudzima mahedhifoni maitiro?
Iye zvino Unoziva Mashandisiro Aungaita Tsvaga yangu iPhone Kubva kuComputer
Inotevera nguva shamwari yako yepamadhijitari painoshaikwa, ndinovimba iyi dzidziso inobatsira! Uchishandisa Tsvaga yangu iPhone kubva pakombuta iri nyore nzira yekuchengetedza yako iPhone yakachengeteka uye uve nechokwadi chekubatanidzwazve nediki diki mutambo sezvinobvira.
Wakambokanganisa iPhone yako zvisati zvaitika here? Ko kushandisa Tsvaga yangu iPhone kubva pakombuta kwakachengetedza zuva? Tiudze nezvazvo muchikamu chemashoko pazasi. Tinoda kunzwa kubva kwauri!
Coronavirus Ribbon T-Shirts Yerudo: Mavara, Zvinoreva, T-Shirts, Magnets, & Zvimwe!
Nei Iyo iPhone X Kamera Yakamira? Hechino Chokwadi!
Mhuno Kubaya Zvinoreva MuBhaibheri
Earthing iwe pachako: Unozviita sei izvozvo? [Mazano gumi nematanhatu ekugadzirisa]
Ndingaite Sei Kuti Ndiwedzere Kuwedzeredzwa Kune Anofambidzana ne iPhone? Heino Kugadzirisa!
Nei yangu iPhone Ichiramba Yotangazve? Heino Kugadzirisa!
Maitiro Ekudzima yako iPhone Pasina A Simba Bhatani: Iyo Inokurumidza Kugadzirisa!
Tsvuku Kadhiina Bhaibheri Zvinoreva - Iwo Makadinali Zviratidzo zvekutenda
Sprint Nhare Dhiri uye Zvirongwa Zvakaenzaniswa | Zvipo Zvakanakisisa zva2017
Ungawana sei rezinesi rekuchengeta vakwegura?
Ndinochinja Sei Zita ReI iPhone Yangu?
Afidhavhiti tafura yeImigration
Nei Kune Fireworks MuMessage App Pane Yangu iPhone?
'Face ID haisi kuwanikwa' pane yako iPhone? Heino mhinduro chaiyo (zvakare yePads)!
Ko Apple Inokutevera Iwe Pane Yako iPhone? Hechino Chokwadi!
'IPhone Haisati Yatsigirwa' Meseji: Zvazvinoreva uye Maitiro Ekubvisa!
Chii chinonzi A 'Inotakura Zvirongwa Kugadziridza' Pane An iPhone? Hechino Chokwadi!
Nei yangu iPhone bhatiri richidhiza nekukurumidza? Heino mhinduro yekupedzisira!
Ini Ndinochinja Sei Bhatiri Peresenti Pane Yangu iPhone?